သင်၏ ActiveCampaign Template | Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့တွင် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများစွာကို ကြော်ငြာပေးသည့် သုံးစွဲသူတစ်ဦးအတွက် အီးမေးလ်ခရီးအချို့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ WordPress site. အသီးအသီး ActiveCampaign ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်နေသည့် အီးမေးလ် နမူနာပုံစံများသည် ၎င်းကို အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ထုတ်ကုန်အတွက် အလွန်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။
WordPress ဆိုက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ပြီး ဖော်မတ်လုပ်ထားသည့် အကြောင်းအရာများစွာကို ပြန်လည်ရေးသားမည့်အစား ၎င်းတို့၏ဘလော့ဂ်ကို ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ် နမူနာပုံစံများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့၏ဘလော့ဂ်သည် ထုတ်ကုန်များစွာကို လွှမ်းခြုံထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသော ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုသာ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် နမူနာပုံစံတစ်ခုစီအတွက် ဖိဒ်ကို စစ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်သည် အရေးကြီးကြောင်း ထောက်ပြသည်။ သင့်ဆောင်းပါးများကို tagging လုပ်ပါ။! သင့်ဆောင်းပါးများကို တဂ်ခြင်းဖြင့်၊ သင့်အကြောင်းအရာကို အီးမေးလ်ကဲ့သို့သော အခြားပလပ်ဖောင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်မေးမြန်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။
သင်၏ WordPress Tag Feed
၎င်းကို သင် မသိခဲ့ပါက၊ WordPress တွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အားကောင်းသည့် အစာကျွေးစနစ် ရှိပါသည်။ သင့်ဆိုက်သည် သင့်ဘလော့ဂ်တစ်ခုတည်း၏ ဖိဒ်အတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည်ဟု သင်ထင်နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါဘူး… သင့်ဆိုဒ်အတွက် အမျိုးအစား-အခြေခံ သို့မဟုတ် တဂ်-အခြေခံဖိဒ်များကိုပင် အလွယ်တကူ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ client သည် ဤဥပမာတွင်ဖြစ်သည်။ တော်ဝင်ရေပူစမ်းနှင့် ဖန်တီးထားသော တင်းပလိတ်နှစ်ခုသည် တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ရေပူစမ်း နှင့်များအတွက် Float Tanks များ.
၎င်းတို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကို ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအလိုက် အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အစား တဂ်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သင့် feed ကိုဝင်ရောက်ရန် permalink လမ်းကြောင်းသည် သင့်ဘလော့ဂ် URL သည် slug tag နှင့် သင့်အမှန်တကယ်တက်ဂ်တို့နောက်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Royal Spa အတွက်
ရေပူကန်များအတွက် တော်ဝင်ရေပူစမ်း ဆောင်းပါးများ- https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/
Royal Spa ဆောင်းပါးများကို Float Tanks အတွက် Tag ထားသည်- https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/
အမှန်တကယ် ရိုးရှင်းသောစုစည်းမှုကို ရရှိရန်အတွက် (RSS ကို) အစာ ၎င်းတို့တစ်ခုစီအတွက်၊ သင်သည် URL သို့ /feed ကိုရိုးရှင်းစွာထည့်နိုင်သည်။
Royal Spa Blog Feed- https://www.royalspa.com/blog/feed/
ရေပူကန်များအတွက် တော်ဝင်ရေပူစမ်း ဆောင်းပါးများ- https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/feed/
Royal Spa ဆောင်းပါးများ Float Tanks အတွက် Tagged: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/feed/
querystring ဖြင့်လည်း သင်လုပ်နိုင်သည်-
Royal Spa Blog Feed- https://www.royalspa.com/blog/?feed=rss2
ရေပူကန်များအတွက် တော်ဝင်ရေပူစမ်း ဆောင်းပါးများ- https://www.royalspa.com/blog/?tag=hot-tubs&feed=rss2
Float Tanks အတွက် တင်ထားသော Royal Spa ဆောင်းပါးများ- https://www.royalspa.com/blog/?tag=float-tank&feed=rss2
ဤနည်းဖြင့် တဂ်များစွာကိုပင် သင်မေးမြန်းနိုင်သည်-
Float Tanks နှင့် ရေပူကန်များအတွက် Royal Spa ဆောင်းပါးများကို Tag ထားသည်- https://www.royalspa.com/blog/?tag=float-tank၊hot-tub&feed=rss2
အကယ်၍ သင်သည် အမျိုးအစားများကို အသုံးပြုနေပါက၊ သင်သည် အမျိုးအစားခွဲ ပက်ကျိများ (အမျိုးအစားခွဲများ အပါအဝင်) နှင့် tags များကို အသုံးချနိုင်သည်... ဤတွင် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားမီဒီယာများအတွက် အကြောင်းအရာများကို သင်ပြန်သုံးထားသောကြောင့် ၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အသုံးဝင်သည်ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးကို ၎င်းတို့၏ သတင်းလွှာများ၊ ပရိုမိုးရှင်းအီးမေးလ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ငွေပေးငွေယူအီးမေးလ်များတွင်ပင် ထည့်သွင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ အပိုအကြောင်းအရာများသည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိ၍ ၎င်းတို့၏အီးမေးလ်ကို ကြွယ်ဝစေနိုင်သည်။
စာတိုက်ပုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအချို့၊ inbox နေရာချထားမှု algorithms အီးမေးလ်များတွင် စာသားဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုတန်ဖိုးထားပေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲဆောင်းပါးများသည် အကြောင်းအရာနှင့် အလွန်သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ တိုးမြှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု သင်၏စာရင်းသွင်းသူများနှင့်။
၎င်းသည် သင့်စာရင်းသွင်းသူများကို ဆော်သြရန် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် သင့်အီးမေးလ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဆီသို့ ညွှန်ကြားခြင်းမပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အပိုတန်ဖိုးနှင့် သင့်စာရင်းသွင်းသူ၏ အလှည့်အပြောင်းကို လျှော့ချပါ။.
သင်သည် ထိုအကြောင်းအရာတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသောကြောင့် ၎င်းကို အဘယ်ကြောင့် ပြန်မရည်ညွှန်းသနည်း။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အမြတ်အစွန်းကို တိုးစေသည်။?
ActiveCampaign သို့ RSS Feed ကိုထည့်ပါ။
ActiveCampaign တွင် RSS Feed တစ်ခုထည့်ရန် ရိုးရှင်းသည်-
ActiveCampaign ကိုဖွင့်ပြီး သွားပါ။ ကမ်ပိန်းများ > နမူနာများကို စီမံပါ။.
ရှိပြီးသား နမူနာပုံစံကိုဖွင့်ပါ (၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်)၊ Template တစ်ခုကို တင်သွင်းပါ။သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ ပုံစံတစ်ခုဖန်တီးပါ။.
ညာဘက်ရှိ Menu ကိုတစ်ချက်ရွေးပါ။ > Blocks > RSS Feed ကိုထည့်ပါ။.
ဒါကဖွင့်လှစ် RSS Feed Builder သင့် Feed လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပြီး ဖိဒ်ကို အစမ်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဝင်းဒိုး။
သင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ RSS Feed. ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ရိုးရှင်းသော လင့်ခ်ချိတ်ထားသော ခေါင်းစဉ်နှင့် အတိုချုံးဖော်ပြချက်ကို လိုချင်ပါသည်။
မင်းအခုတွေ့လိမ့်မယ် သင့် Email Template တွင် ဖြည့်စွက်ပါ။သင်ဆန္ဒအတိုင်း layout ကိုမွမ်းမံနိုင်သောနေရာတွင်။
ဤနည်းစနစ်၏ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာ သင့်ဘလော့ဂ်တွင် အကြောင်းအရာအသစ်များကို ဆက်လက်ထုတ်ဝေနေချိန်တွင် အီးမေးလ်များနှင့် ခရီးများတွင် အကြောင်းအရာအသစ်များကို ထပ်ခါတလဲလဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ ActiveCampaign ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များအား အဆင့်မီအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ WordPress ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှု ဗျူဟာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု။ တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Highbridge.
Tags: ActiveCampaignဘလော့ဂ်များအမျိုးအစားအစာကျွေးခြင်းစိတ်ကြိုက်ကျွေးပါ။အီးမေးလ်စျေးကွက်အစာတကယ်ရိုးရှင်းစွာစုစည်းမှုတော်ဝင် spaRSS ကိုrss feed ကိုrss feed တည်ဆောက်သူအီးမေးလ်ပို့ရန်စုစည်းtag ကျွေးသည်မှတ်သားခြင်းWordPresswordpress feed ပါwordpress tag feed ပါ။